ပြင်ဦးလွင်နဲ့နောင်ချိုက မိသားစုတွေ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ… - ThutaStar
ပြင်ဦးလွင်နဲ့နောင်ချိုက မိသားစုတွေ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ…
August 15, 2019 Thuta Star သတင်း 0
ပြင်ဦးလွင်မှာ သတိရှိကြပါ။ နောင်ချိုဂိတ်နားတွေမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာပါ….
နောင်ချိုတပ်တွေကော ဝင်ချနေလို့ တိုက်ပွဲဖစ်နေပါတယ်။ဂုတ်တွင်း တပ်စခန်းကိုလဲ ဝင်ချနေလို့ တိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်။
ပြင်ဦးလွင် DSTA ကို လက်နက်ကြီးနဲ့ လှမ်းပစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်လောင်းတွေ ထိခိုက်မှုမရှိပါ အရပ်သားတစ်ဦးထိတယ်လို့တော့ သိရပါတယ်။
ဝင်ချတဲ့အဖွဲ့က မြောက်ပိုင်းမာဟာမိတ်လေးဖွဲ့က TNLA(ပလောင်)နဲ့ SSPP SSA (မြောက်ပိုင်း ရှမ်း)အဖွဲ့တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့မဟာမိတ် AA(ရခိုင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့)အခြေအနေ မကောင်းလို့ ဒီဘက်မှာ စစ်မျက်နှာဖွင့်တဲ့သဘောပါ။
ပြင်ဦးလွင်က မိသားစုတွေ အသွားအလာ ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ပါ။
တပ်မတော်က ငြိမ်းချမ်းရေး တစ်ကယ်လိုချင်လို့ တစ်ဖက်သတ် အပစ်ရပ်ပေးထားတာ အားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ် ။
ခုလိုအချိန်မှာ ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားပါဘူး ….ပြင်ဦးလွင်မြို့ကို ဝင်ချလဲ ဘာသံမှ ထွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲ တပ်မတော်က ထိုးစစ်ဆင်ပြီ ဆိုရင်တော့ အချိန်ကိုက် စစ်ပွဲနေတွေရပ်တို့ ဘာတို့ညာတို့ အချိန်ကိုက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးဂီတပွဲတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သတိထားပြီး စောင့်ကြည့်နေကြည့်ပါ။
ပြင်ဦးလွင်နဲ့နောင်ချိုက မိသားစုတွေ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ…..။Cd_Aung ko san min
ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှောင်လမ်းအနီးက တောင်ကုန်းတစ်ခုမှာ သောင်းကျန်းသူတွေ မြို့ထဲကိုပစ်ခတ်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ဘတ္ထရီရှော့တိုက်ဒုံးတွေပါ တပ်မတော်ကသာ အချိန်မီနယ်မြေရှင်းလင်းရေးသာမလုပ်ခဲ့မိရင် မတွေးဝံ့စရာပါ။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ နောင်ချိုမြို့သို့အထွက် ပြင်ဦးလွင်တိုးဂိတ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ်ရှိ ဂုတ်တွင်း ရဲစခန်း၊ ကျောက်မဲမြို့သို့အထွက် နောင်ချိုတိုးဂိတ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့် နယ်မြေခံ တပ်ရင်းဌာနချုပ်တစ်ခုတို့အား ….
ယနေ့နံနက် ၅ နာရီခွဲခန့်တွင် အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများက လက်နက်ကြီး/လက်နက်ငယ်များဖြင့် လာရောက်နှောင့်ယှက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် တပ်မတော်သား ၁ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး အပြစ်မဲ့အရပ်သားဝန်ထမ်း ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်အား အဆိုပါကျောင်း၏ အရှေ့ဘက် ပြင်ဦးလွင်-လားရှိုးကားလမ်း၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းမှ ၁၀၇ မမ ရှော့တိုက်ဒုံးသီးများဖြင့်လည်းကောင်း၊ အေးရှားဝေါလ်တိုးဂိတ်နှင့် အဆိုပါတိုးဂိတ်ရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တို့အား မော်တော်ယာဉ် ၁ စီးပေါ်မှ အရပ်ဝတ် ဝတ်ဆင်ထားသူ ၂ ဦးမှ အာရ်ပီဂျီဖြင့်လည်းကောင်း၊
နောင်ချိုမြို့နယ်ရှိ ဂုတ်တွင်းရဲကင်းစခန်း၊ ကျောက်မဲသို့အထွက် နောင်ချိုတိုးဂိတ်နှင့် နယ်မြေခံတပ်ရင်းဌာနချုပ်အား နံနက် ၅ နာရီခွဲခန့်တွင် တစ်ချိန်တည်းတပြိုင်တည်း အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများက နှောင့်ယှက် ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် မိမိဘက်မှ ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားလျှင် ဖြစ်ချင်း တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ဂုတ်တွင်းရဲကင်းစခန်း၊ နောင်ချိုတိုးဂိတ် နှင့် အေးရှားဝေါလ်တိုးဂိတ်တို့အား စစ်ကူများသွားရောက် ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ဆက်လက်နယ်မြေ ရှင်းလင်းစဉ် တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ အရှေ့ဘက် ပြင်ဦးလွင်-လားရှိုးကားလမ်း၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ တောင်ကုန်းပေါ်မှ ……
ဘတ္ထရီအိုး၊ ဝါယာကြိုးများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် Type 63 ၁၀၇ မီလီမီတာ အမျိုးအစားဒုံးသီး ၆ လုံး၊ရှော့တိုက်ဒုံးများ ပစ်ခတ်ရန် အသင့်ပြုလုပ်ထားသည့် နေရာများနှင့် ဘတ္ထရီအိုး ၁ လုံးတို့အား တွေ့ရှိရသည်။
နောင်ချိုမူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့် ဂုတ်တွင်းရဲကင်းစခန်းနေရာများတွင် မိမိ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများနှင့် ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး အသေးစိတ်သတင်းများ ရရှိပါက ဆက်လက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။
တပ်မတော်အနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်စာပိုဒ်(၇)၌ “ နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုယန္တရားအဆင့်တွင်လည်းကောင်း၊
လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုလုံခြုံ ချောမွေ့စေရေးတွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်းနှင့် အကျိုးစီးပွားများကိုလည်းကောင်း ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန်အတွက် တာဝန်ယူရမည် ” ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဖောက်ဖျက်လာပါက တပ်မတော် အနေဖြင့် လိုအပ်သလို တားဆီးဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ လိုအပ်သည်များ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ပြင်ဦးလွင်သတင်း
ပွငျဦးလှငျမှာ သတိရှိကွပါ။ နောငျခြိုဂိတျနားတှမှော တိုကျပှဲဖွဈနတောပါ….
နောငျခြိုတပျတှကေော ဝငျခနြလေို့ တိုကျပှဲဖဈနပေါတယျ။ဂုတျတှငျး တပျစခနျးကိုလဲ ဝငျခနြလေို့ တိုကျပှဲဖွဈနပေါတယျ။
ပွငျဦးလှငျ DSTA ကို လကျနကျကွီးနဲ့ လှမျးပဈပါတယျ။ ဗိုလျလောငျးတှေ ထိခိုကျမှုမရှိပါ အရပျသားတဈဦးထိတယျလို့တော့ သိရပါတယျ။
ဝငျခတြဲ့အဖှဲ့က မွောကျပိုငျးမာဟာမိတျလေးဖှဲ့က TNLA(ပလောငျ)နဲ့ SSPP SSA (မွောကျပိုငျး ရှမျး)အဖှဲ့တှေ ဖွဈပါတယျ။
သူတို့မဟာမိတျ AA(ရခိုငျအကွမျးဖကျအဖှဲ့)အခွအေနေ မကောငျးလို့ ဒီဘကျမှာ စဈမကျြနှာဖှငျ့တဲ့သဘောပါ။
ပွငျဦးလှငျက မိသားစုတှေ အသှားအလာ ဆငျခွငျနိုငျဖို့ပါ။
တပျမတျောက ငွိမျးခမျြးရေး တဈကယျလိုခငျြလို့ တဈဖကျသတျ အပဈရပျပေးထားတာ အားလုံးအသိဖွဈပါတယျ ။
ခုလိုအခြိနျမှာ ဘယျသူမှ စိတျမဝငျစားပါဘူး ….ပွငျဦးလှငျမွို့ကို ဝငျခလြဲ ဘာသံမှ ထှကျမှာ မဟုတျပါဘူး။
အဲ တပျမတျောက ထိုးစဈဆငျပွီ ဆိုရငျတော့ အခြိနျကိုကျ စဈပှဲနတှေရေပျတို့ ဘာတို့ညာတို့ အခြိနျကိုကျပျေါလာပါလိမျ့မယျ။
ငွိမျးခမျြးရေးဆုတောငျးပှဲတှေ ငွိမျးခမျြးရေးဂီတပှဲတှပေျေါလာပါလိမျ့မယျ။ သတိထားပွီး စောငျ့ကွညျ့နကွေညျ့ပါ။
ပွငျဦးလှငျနဲ့နောငျခြိုက မိသားစုတှေ ဘေးအန်တရာယျကငျးကွပါစေ။Cd_Aung ko san min
ပွငျဦးလှငျမွို့ရှောငျလမျးအနီးက တောငျကုနျးတဈခုမှာ သောငျးကနျြးသူတှေ မွို့ထဲကိုပဈခတျဖို့ စီစဉျထားတဲ့ ဘတ်ထရီရှော့တိုကျဒုံးတှပေါ တပျမတျောကသာ အခြိနျမီနယျမွရှေငျးလငျးရေးသာမလုပျခဲ့မိရငျ မတှေးဝံ့စရာပါ။
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ပွငျဦးလှငျမွို့နယျ၊ ပွငျဦးလှငျမွို့ရှိ တပျမတျောနညျးပညာတက်ကသိုလျ၊ နောငျခြိုမွို့သို့အထှကျ ပွငျဦးလှငျတိုးဂိတျ၊ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး နောငျခြိုမွို့နယျရှိ ဂုတျတှငျး ရဲစခနျး၊ ကြောကျမဲမွို့သို့အထှကျ နောငျခြိုတိုးဂိတျ၊ မူးယဈဆေးဝါးစဈဆေးရေးဂိတျနှငျ့ နယျမွခေံ တပျရငျးဌာနခြုပျတဈခုတို့အား ….
ယနနေံ့နကျ ၅ နာရီခှဲခနျ့တှငျ အကွမျးဖကျသောငျးကနျြးသူမြားက လကျနကျကွီး/လကျနကျငယျမြားဖွငျ့ လာရောကျနှောငျ့ယှကျ ပဈခတျတိုကျခိုကျခဲ့သဖွငျ့ တပျမတျောသား ၁ ဦး ထိခိုကျဒဏျရာရရှိခဲ့ပွီး အပွဈမဲ့အရပျသားဝနျထမျး ၁ ဦး သဆေုံးခဲ့ကွောငျးသတငျးရရှိပါသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ပွငျဦးလှငျမွို့ရှိ တပျမတျောနညျးပညာတက်ကသိုလျအား အဆိုပါကြောငျး၏ အရှဘေ့ကျ ပွငျဦးလှငျ-လားရှိုးကားလမျး၏ အရှဘေ့ကျခွမျးမှ ၁၀၇ မမ ရှော့တိုကျဒုံးသီးမြားဖွငျ့လညျးကောငျး၊ အေးရှားဝေါလျတိုးဂိတျနှငျ့ အဆိုပါတိုးဂိတျရှိ မူးယဈဆေးဝါးစဈဆေးရေးဂိတျတို့အား မျောတျောယာဉျ ၁ စီးပျေါမှ အရပျဝတျ ဝတျဆငျထားသူ ၂ ဦးမှ အာရျပီဂြီဖွငျ့လညျးကောငျး၊
နောငျခြိုမွို့နယျရှိ ဂုတျတှငျးရဲကငျးစခနျး၊ ကြောကျမဲသို့အထှကျ နောငျခြိုတိုးဂိတျနှငျ့ နယျမွခေံတပျရငျးဌာနခြုပျအား နံနကျ ၅ နာရီခှဲခနျ့တှငျ တဈခြိနျတညျးတပွိုငျတညျး အကွမျးဖကျသောငျးကနျြးသူမြားက နှောငျ့ယှကျ ပဈခတျခဲ့သဖွငျ့ မိမိဘကျမှ ပွနျလညျပဈခတျတိုကျခိုကျခဲ့သညျ။
ဖွဈစဉျဖွဈပှားလြှငျ ဖွဈခငျြး တပျမတျောစဈကွောငျးမြားက ဂုတျတှငျးရဲကငျးစခနျး၊ နောငျခြိုတိုးဂိတျ နှငျ့ အေးရှားဝေါလျတိုးဂိတျတို့အား စဈကူမြားသှားရောကျ ပူးပေါငျးခဲ့ပွီး ဆကျလကျနယျမွေ ရှငျးလငျးစဉျ တပျမတျောနညျးပညာတက်ကသိုလျ၏ အရှဘေ့ကျ ပွငျဦးလှငျ-လားရှိုးကားလမျး၏ အရှဘေ့ကျခွမျးရှိ တောငျကုနျးပျေါမှ ……
ဘတ်ထရီအိုး၊ ဝါယာကွိုးမြားနှငျ့ ခြိတျဆကျထားသညျ့ Type 63 ၁၀၇ မီလီမီတာ အမြိုးအစားဒုံးသီး ၆ လုံး၊ရှော့တိုကျဒုံးမြား ပဈခတျရနျ အသငျ့ပွုလုပျထားသညျ့ နရောမြားနှငျ့ ဘတ်ထရီအိုး ၁ လုံးတို့အား တှရှေိ့ရသညျ။
နောငျခြိုမူးယဈဆေးဝါးစဈဆေးရေးဂိတျနှငျ့ ဂုတျတှငျးရဲကငျးစခနျးနရောမြားတှငျ မိမိ တပျမတျော စဈကွောငျးမြားနှငျ့ ထိတှတေို့ကျခိုကျမှုမြား ဖွဈပှားလကျြရှိပွီး အသေးစိတျသတငျးမြား ရရှိပါက ဆကျလကျ၍ သတငျးထုတျပွနျသှားမညျဖွဈသညျ။
တပျမတျောအနဖွေငျ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ ၂၁ ရကျနတှေ့ငျ ထုတျပွနျခဲ့သညျ့ ပဈခတျ တိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးနှငျ့ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ထုတျပွနျခကျြစာပိုဒျ(၇)၌ “ နိုငျငံတျော အစိုးရ၏ အုပျခြုပျမှုယန်တရားအဆငျ့တှငျလညျးကောငျး၊
လမျးပနျးဆကျသှယျမှုလုံခွုံ ခြောမှစေ့ရေေးတှငျ လညျးကောငျး၊ ပွညျသူလူထု၏အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျးနှငျ့ အကြိုးစီးပှားမြားကိုလညျးကောငျး ထိခိုကျမှုမဖွဈစရေနျအတှကျ တာဝနျယူရမညျ ” ဖွဈကွောငျးနှငျ့ ဖောကျဖကျြလာပါက တပျမတျော အနဖွေငျ့ လိုအပျသလို တားဆီးဆောငျရှကျသှားမညျဟု ထုတျပွနျခဲ့ပွီးဖွဈရာ လိုအပျသညျမြား ဆကျလကျဆောငျရှကျမညျဖွဈကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ပွငျဦးလှငျသတငျး
ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေ အလှူက အပြန် အရေးပေါ် ဆေးရုံတင်လိုက်ရတဲ့ မအေးသောင်း
မိဘဆရာများ သတိထားသင့်တဲ့ အသက် ၁၃ နှစ် နဲ့ ကိုယ်ဝန် ၅ လရှိခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူမိန်းကလေး ရဲ့ အဖြစ်